Tsipy kanetibe: vaky ny ady eo amin’ny FMP sy ny federasiona iraisam-pirenena | NewsMada
Nanao ampamoaka tamin’ny mpanao gazety ny federasiona malagasin’ny tsipy kanetibe (FMP), ny asabotsy lasa teo tetsy amin’ny ANS Ampefiloha. Nambaran-dRazafindrainiony Beryl Lala, filohan’ny federasiona malagasy, fa ampy izay ny fotoana hanginana. Nolazainy fa tsy hipetra-potsiny intsony ny tenany sy ny ekipany, amin’ny fanaratsiana sy ny fanasoketana azy ireo ho manao kolikoly sy manimba ny tsipy kanetibe ka ilazana fa maka vola amin’ny mpilalao.
Hitondra ny raharaha eny anivon’ny fitsarana mihitsy izy ireo ka hametraka fitoriana amin’ireo olona voakasik’izany. Anisan’ireny i Alenj Joel (Toutoune), izay nilaza fa nisy volana 5 tapitrisa Ar noraisin’ny federasiona. Nolazain’i Beryl fa vonona izy ny hiatrika ny famotorana, ary hiala amin’ny toerany raha manana porofo ireo olona mitoroka azy ho manao ny tsy rariny.
Nanambara ny fahavononany ihany koa ny tenany hiatrika sy hamaly ireo fiampangana nataon’ny federasiona iraisam-pirenena azy ho manao hosoka amin’ny kara-pilalaovana sy ny fanangonam-bola, amin’ireo mpilalao malagasy any Frantsa. “Ny mahagaga, hatreto, tsy mbola nahazo fanasana hiatrehana ny fivoriambe hatao any Espaina, ny 1 mey ho avy izao, izahay. Efa indroa nangataka izany tany amin’ny federasiona iraisam-pirenena, saingy tsy misy valiny. Ilaina anefa ny fakàna “visa” handehanana any. Tsy fantatray intsony na tsy tiana hanatrika izany izahay na ahoana”, hoy izy.
Na izany na tsy izany, tsy maintsy hitady ny hevitra rehetra ny FMP hiatrehana izany.